हव अस्पतालका प्रमुखहरूलाई स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको निर्देशन - Sarokar Khabar
१६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १६:०६
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित हुन हव अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । हव अस्पतालका प्रमुखहरूलाई शुक्रबार मन्त्रालयमै बोलाएर मन्त्री ढकालले पूर्ण क्षमतामा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको हो । केही दिनदेखि उपचारका बारेमा गुनासोहरू समेत सुनिएको भन्दै मन्त्री ढकालले कुनै पनि गुनासो आउन नदिने गरी अस्पताल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
एकले अर्कोलाई गुनासो गरेर बस्ने समय नरहेको भन्दै मन्त्री ढकालले योजना अनुसार पूर्ण क्षमतामा काम गरेर अब्बलता देखाउन अस्पतालका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सूचना प्रणाली समेत बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै स्याटेलाइट अस्पतालहरूले हब र हब अस्पतालले मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले नीति, निर्देशिका, कार्यबिधिमा कुनै पनि समस्या आए तुरून्त परिवर्तन गर्न सकिने भन्दै हरेक समस्याको विकल्पसहितको समाधान खोजिनुपर्ने बताउनुभयो । कुनै पनि अस्पतालाई स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव हुन नदिने भन्दै मन्त्री ढकालले चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री ढकालले मानवश्रोतको परिचालन सबन्धी स्पष्ट योजना बनाउन र बिरामी बढ्दै जाँदा बेडको व्यवस्थापनका बारेमा पूर्व तयारी गरेर कार्यान्वयनमा जान निर्देशन पनि दिनुभयो । उहाँले बिरामी रिफरका लागि स्वास्थ्य आपत्कालीन केन्द्रको नेतृत्वमा तत्काल संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो ।
२ बैशाख २०७८, बिहीबार १४:०८0
एक हप्ता भित्र माग पुरा गर्न विद्यार्थी संगठनहरुको आग्रह
सिन्धुली, २ बैशाख २०७८ सिन्धुलीको बहुमुखी क्याम्पस प्रशासनलाई विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्ना जायज मागहरु तत्काल पुरा गर्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबार विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी
२ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०३:०४0
प्रंहरी जवानले आफैलाई किन गोलि हाने ?
सिन्धुली, २ फागुन / जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी जवान चन्द्रकिशोर राय गोलि लागेर गम्भिर घाईते हुनु भएको छ । प्रहरी उपरीक्षक रञ्जु सिग्देलका अनुसार रायले आफैलाई गोली हानेका हुन् । उहाँको
सिन्धुली, २९ जेठ २०७७ मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (हेण्डस) नेपाल सिन्धुलीले ्रभात माध्यमिक विद्यालय रानीवासलाई स्वास्थ्य तथा शैक्षिक सामाग्रि सहयोग गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक अरुण थिंग म
१८ भाद्र २०७७, बिहीबार १४:४६0
सुनकोशी नदीमा महिलाको शव फेला
सिन्धुली, १८ भदौ २०७७ सुनकोशी नदी किनारमा आज एक महिलाको शव फेला परेको छ । सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका ४ खाङसाङबेसी र वडा न ५ सोल्पाठानाको सिमाना सुनकोसी नदिको किनारमा महिलाको शव फेला परेको हो । ज
गुट रहित पार्टी बनाई जिल्लामा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउछु : पोख्रेल १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १६:०६
कविता : दिउ अरुलाइ नै दोष दिउ ! १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १६:०६
सेवा निवृत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सम्मानित १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १६:०६
सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १६:०६
प्लानद्धारा कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १६:०६
कोभिड–१९ अस्पतालाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १६:०६
गोलन्जोरमा कृषकलाई राँगा र बोका वितरण १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १६:०६
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुरोध १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १६:०६
दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १६:०६
वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु आन्दोलित १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १६:०६